ကွန်နက်ရှင်တွေ ကောင်းတော့မယ်တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကွန်နက်ရှင်တွေ ကောင်းတော့မယ်တဲ့
Posted by ဘဲဥ on Feb 6, 2012 in Copy/Paste |6comments
အောင်မယ်လေး။ တော်ပြီ။ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းအောင်စောင့်တော့ဘူးရယ်။ ရှိတာနဲ့ပဲသုံးပြစေတော့။
အင်းးးးး ကွန်နက်ရှင်ကို စိတ်စွဲပြီး အဲဒီလို ဘ၀ရောက်သွားရင်
ကွန်နက်ရှင်နဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေကို နက်ပေါ်ကနေများ ခြောက်လှန့်နေလေမလား….
စိတ်စွဲ ပြီး ဒီဘဝ ရောက်သွားရင် လိပ်လိုနှေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အရေခြုံကြီးတွေကို
နက်ပေါ်မှ တဆင့် ခြောက်လှန့်မည်ဟု ပြင်ဆင်ထားပါကြောင်း …. ။
အမလေးလေး ကော်နတ်ရှင်ကောင်းအောင်ထိုင်စောင့်ရင်း အဲလိုဖြစ်သွားလို.ကတော့ ကိုကြီးကျော်၊ ဦးရှင်ကြီးတို.လို. နတ်စိမ်း ဖြစ်သွားရင် ကော်နက်ရှင်စောင့် နတ် ဖြစ်အုံးမယ်…….. ကော်နက်ရှင်မကောင်းရင် ဆာဗာတွေမှာ ကတော့ပွဲလေးတွေထိုးပြီး ပူဇော်ပသနေရအုံးမယ်……… ကြည့်လဲလုပ်ကြပါအုံး ဟဟဟဟဟ
facebook ပေါ်မှာ ပုံတစ်ပုံတွေ့တယ် .. သေခါနီးအဖိုးဖြစ်သူက မြေးကိုမှာနေတာ … အဖိုးသေသွားလျှင် မင်းတို့တစ်သက် ဒီdownload လေးပြီးအောင်တော့ ဆွဲပေးပါ မြေးတို့ရေတဲ့ … ဖတ်ပြီး ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်ချင်မိသွားတယ် ..
မှတ်မှတ်ရရဒီဇင်ဘာ 17ရက်နေ့လား .. 7ရက်နေ့ကလားမသိဘူး .. မ ကောင်းတဲ့ ကော်နက်သေ … အခုတောင် အိပဲ့ အိပဲ နဲ့ … gtalk status တစ်ခုတွေ့တယ် … ရေအောက်ကြိုး မှာ ခရု ခလုတ်တိုက်၍လည်းကောင်း ၊ မြေပေါ်ကြိုးမှာ ဖားပြုတ်ကိုက်၍လည်းကောင်း ကော်နက်ရှင် ခဏခဏကျသည်တဲ့ … ။ ရေးလည်း ရေးတတ်တယ် … ။
အင်တာနက် ဆားဗစ်လိုင်းတွေ ဒီလောက်အများကြီး တိုးချဲ့ပေမယ့် ကော်နက်ရှင် သိသိသာသာကြီး မြန်မလာဘူး … ။ကြော်ငြာအားတော့ကောင်းတယ် တကယ်သုံးလျှင် ဖွတ်ချက် … ဖွတ်ချက်နဲ့ … ။